२४ उद्योग विरुद्ध मुद्दा | Online Nepal
सोमबार, असोज २६ २०७७
काठमाडाैँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ । चाडवार्ड नजिक आएकाले टोली गठन गरी खाद्य अनुगमन तथा परीक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिइएको हो । विभागका सहप्रवक्ता सन्तोष दाहालले अनुगमनका क्रममा खाद्य ऐन प्रतिकुल देखिएका उत्पादक कम्पनी तथा उद्योग विरुद्ध मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए।
तत्कालै गुनासो सुन्न तयार पारिएको समुह ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ मा विभिन्न २४ उजुरी परेकोमा एक पानी उद्योग अनुमती वीना सञ्चालन भएको पाइएकाले बन्द गराइएको छ । खाद्य ऐन विपरित रहेको दुई उद्योगलाई उत्पादन रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । अन्य २१ उद्योग विरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको दाहालले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार विभाग र मातहतका कार्यालयबाट कुल ३९८ स्थानका होटल, खाद्य उद्योग, दाना उद्योग खाद्य पसलमा अनुगमन भएको थियो । त्यसमध्य खाद्य पदार्थ तथा दाना उद्योगको २७८ र खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि १५५ गरी ४३३ नमूना सङ्कलन भएको थियो । परीक्षणका क्रममा १४ वटा नमूना प्रतिकुल देखिएकाले कारावही गरिएको छ । अन्य अनुसन्धान कै क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
अहिले भने चाडबाड केन्द्रीत अनुगमन टोली तयार गरी परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ । मातहतका कार्यालयलाई समेत अनुगमनलाई तिब्रता दिन दिर्नेशन दिइएको छ ।
यसअघि पानी उद्योगमा ५४ पटक अनुगमन भएको र २५ नमूना सङ्कलन भएको थियो । दुई वटा नमूना प्रतिकुल देखिएकाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । अन्य नमूना विष्लेषणको क्रममा छ । सात दुग्ध उद्योगमा अनुगमन भएकोमा छ वटाको नमूना सङ्कलन भएको छ । खाद्य व्यवसायको ३१ ठाउँमा अनुगमन भएकोमा ३४ नमूना सङ्कलन गरिएको र एउटा प्रतिकुल देखिएकाले कारवाही प्रक्रिया शुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उद्योग परिसङ्घको अध्यक्षमा अग्रवाल
माओवादीमा फर्कने सम्भावना न्यून : लेखराज भट्ट
गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने ३ उद्योगमाथि मुद्दा
सरकारले उद्योगलाई व्यवस्थित गर्छ : मन्त्री लम्साल
कैलाली र कञ्चनपुरका आठ उद्योगको उत्पादन रोक्का, एकको फुकुवा
सिरहामा ४५ उद्योगको दर्ता खारेज
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले किन दिए राजीनामा ?
आमाको जन्मदिनकै दिन १५ वर्षीय बालकले गरे आमा, बाबु र बहिनीको हत्या
माधव नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन : ओलीमाथि खरो टिप्पणी, गठबन्धन जारी राख्न जोड (पूर्णपाठ)
डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री बन्ने पक्का
टिकटक बनाउने बहानामा सेती नदीमा खसेकी युवतीको शव आठ दिनपछि फेला
मुस्ताङमा भेटियो नयाँ प्रजातिको चरा
आजबाट सोह्र श्राद्ध शुरु, पितृलाई कसरी खुशी बनाउने ?
आजको मौसम : यी प्रदेशमा ठूलो पानी पर्दै